स्वागत गर्न "Myunhel", यसको आफ्नै परम्परा संग रेस्टुरा
सेन्ट पीटर्सबर्ग - शहर रात जीवन, आगो र आनन्द। यहाँ, त्यहाँ कहीं कहाँ साथीहरू र एक स्वादिष्ट भोजन संग समय खर्च गर्न, जान सधैं छ। आज हामी "Myunhel" भनिने नेटवर्क बारेमा बताउन चाहन्छु। रेस्टुरेन्ट छ बासिन्दा र आगंतुकों उस्तै बीच धेरै लोकप्रिय। उत्कृष्ट भित्री ठूलो सेवा, आनन्द तपाईं ड्रप सम्म - यो सबै तपाईं यहाँ पर्खिरहेको। हामी भने छ, यो बियर रेस्टुरेन्ट को एक विकास नेटवर्क, हामी तपाईंलाई थोडा थप बताउन छौँ जो प्रत्येक छ।
काठ पर्खालहरु र छाला सोफे, सजावट को एक न्यूनतम - अक्सर बियर रेस्टुरेन्ट धेरै नै प्रकार सजाया छन्। तर, तपाईं जस्तो केहि, तपाईं "Myunhel" (रेस्टुरेन्ट) जाने निर्णय भने हेर्न हुनेछ। तिनीहरूले सबै विभिन्न पहिचान प्रत्येक तर जर्मन burgher एक आरामदायक बैठक कोठा जस्तो। को भित्री मा, त्यहाँ सोफे र ठूलो कुर्सी, पुराना कुर्सियों र Fireplaces छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - यो अवश्य जो सबै भन्दा राम्रो बियर ल्याउन यसको आफ्नै भठ्ठी छ। प्रत्येक रेस्टुरेन्ट मा भान्सा यसको आफ्नै, मुख्य रूप युरोपेली र धेरै विविध छ। धेरै व्यञ्जन खुला आगो माथि तयार छन्। को सांझ सधैं प्रत्यक्ष संगीत, अक्सर थिम्ड पार्टी मा।
रेस्टुरेन्ट "Myunhel" ग्रांड Canyon
यो सेन्ट पीटर्सबर्ग मा सबै भन्दा लोकप्रिय ठाउँहरू मध्ये एक हो। यो एक अविस्मरणीय वातावरण अर्को यस्तो रेल क्लब, र Bavaria को यो क्षेत्र पत्ता लगाउन गाह्रो छ।
महान् घाटी - आधुनिक क्लब, जहाँ हरेक दिन पट्टाइ लागि कुनै ठाउँ छ। यो सुविधा जहाँ तपाईं रोमान्टिक वातावरणमा समय खर्च गर्न सक्छन्2फर्श, तालिका वा नृत्य मा बस्न। रेस्टुरेन्ट क्लब - सबै स्वाद को लागि सभ्य बियर र ककटेल मेनु, साथै खानपान संग रेस्टुरा। त्यहाँ धेरै आगंतुकों छ शनिवार गर्न शुक्रवार देखि, यो अग्रिम तालिका बुक गर्न राम्रो छ। तपाईं को लागि यहाँ 01:00 सम्म 12:00 देखि हरेक दिन प्रतीक्षा गर्दै।
मेनु को विशिष्ट सुविधाहरू
धेरै विश्वास छ कि एक रेस्टुरेन्ट-भठ्ठी - यो भोजनालय, बियर मात्र आलु चिप्स र पागल गर्दछ जो। तपाईं नै राय लीन भने, यो "Myunhel" गए धेरै गलत र बस कहिल्यै। यस्तो उपस्थिति संग रेस्टुरा बस खराब हुन सक्दैन। यो जहाँ खाना धेरै तेल र धेरै उपयोगी छ छिटो खाना, छैन। त्यहाँ एक अविस्मरणीय अनुभव छोड्न र आंकडा हानि छैन भनेर उपयोगी र प्रकाश भोजन को धेरै छन्। उदाहरणका लागि, "मूल" चिकन सलाद। तपाईं जस्तै केही प्रयास छैन!
रेस्टुरा-पब कसरी पाउन
वास्तवमा, यो धेरै लिन गर्दैन। यसलाई मा स्थित छ संभावना Engels, हप्तादिन मा घर 154. यहाँ 01:00 गर्न 12:00 देखि यसको अतिथि लागि प्रतीक्षा, बन्द दिन - सोमवार। र आइतबार र शनिबार पार्टी बिहान सम्म जारी छ। अन्तिम ग्राहकको 06:00 मा escorted थियो। समीक्षा द्वारा न्याय, तपाईं एक जादुई साँझ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आरामदायक वातावरण र अनुकूल कर्मचारी, हास्यास्पद शो र बेजोड मेनु - यो सबै हरेक साँझ त्यहाँ एक छुट्टी जस्तै बनाउँछ। र तपाईं एक उत्सव योजना छ भने, "Myunhel" एउटा यात्रा योजना संकोच छैन। सेवाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला यस्तो संग रेस्टुरा ठीक तपाईं र तपाईंको अतिथि खुसी पार्न।
Cosmonauts मा रेस्टुरेन्ट
यो नेटवर्क को अर्को ठूलो प्रतिनिधि। रेस्टुरेन्ट "Myunhel" (सेन्ट पीटर्सबर्ग) - कुनै दोष नभएको भोजन र उत्कृष्ट मुड को एउटा उदाहरण हो। तपाईंको साँझ पक्कै पनि राम्रो को एक हुनेछ। स्वादिष्ट बियर, स्वादिष्ट भोजन, मैत्री सेवा - सबै राम्रो मुड मा एक बहुरूपदर्शक जस्तै बनाए। अतिथि छैन केवल सस्ता मूल्यहरु को downsides भन्छन्, तर अर्कोतर्फ, गुणस्तर महंगा हुनुपर्छ। यो रेस्टुरेन्टको ठेगाना - Cosmonauts सडक, 65/2।
Bogatyrsky मा रेस्टुरेन्ट
र फेरि हामीलाई यो अद्भुत नेटवर्क को निर्माताहरू चकित। बियर रेस्टुरेन्ट "Myunhel" - को भित्री मा शैली को एक वास्तविक उदाहरण हो, र डिजाइनर को हरेक संस्थाले भन्दा महिमा लागि कडा परिश्रम गर्न भएको थियो। यस कारण, अब हामी जहाँ तपाईं फेरि र फेरि फर्कन चाहनुहुन्छ ठाउँ छ। तपाईं भोजन र खाने कहाँ आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ, धर्मनिरपेक्ष दल खर्च र मिति सहमत हुनुहुन्छ। ग्रांड Canyon नभई एक आश्चर्यजनक शान्तिपूर्ण वातावरण छ। रेस्टुरेन्ट एक घर घर को भूमि तल ओगटेको छ। को भित्री कुर्सियों कुर्सी अतिथि आशा सट्टा न्यानो रंग संग डिजाइन गरिएको छ। सबै छ आरामदायक कोठा जहाँ त्यहाँ फोटो र स्मृति चिन्ह संग लकर छन् आरामदायक कोठा र एउटा सानो जीवित कोठा, सजाया छन्। Involuntarily तपाईं घर वा भ्रमण नातेदार मा लाग्छ।
Bogatyrsky मा "Myunhel" रेस्टुरेन्ट - कुनै पनि बैठक पकड ठूलो स्थान, मैत्री जमघट वा औपचारिक वार्ता कि। मेनु दुनिया मा कुनै पनि भोजन बाँधिएको छैन, धेरै विविध छ र विशेष गरी आकर्षक छ। परम्परागत मासु व्यञ्जन आधार। तर यहाँ तपाईं पूर्वी Laghman र इटालियन पास्ता, साथै शानदार र सुगन्धित पिज्जा स्वाद गर्न सक्छन्।
कारण रेस्टुरेन्ट प्रशासन को संवेदनशीलता, यो स्थान विषय पार्टी मा एक रात्रिभोज बारी धेरै सजिलो छ। यो लागि आवश्यक सबै प्रदान गर्न खुसी हुनेछन्। गीत मा सलाम छोएर - खेल प्रशंसक लागि, लामो-प्रतीक्षा प्रसारण प्रतियोगिताहरु दिन को नायक लागि संगठित। छ अलग कोठा सबैलाई अरूलाई हस्तक्षेप जो छैन साँझ, खर्च गर्न अनुमति दिन्छ।
रेस्टुरेन्ट बारेमा "Myunhel" endlessly कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो आफ्नै आँखाले हेर्न, र स्वादिष्ट भोजन प्रयास धेरै राम्रो छ। समीक्षा द्वारा न्याय, यो असन्तुष्ट रहन असम्भव छ। हल्ला दल र रोमान्टिक कुराकानी, मासु र आहार व्यञ्जन प्रशंसक - सबै ठीक हेर्न चाहनुहुन्छ के आग्रह गरिने छ। आफ्नै भठ्ठी देखि एक ताजा बियर सबै बियर प्रेमीहरूको विजयी। तपाईं फेरि आउन चाहेको छैन।
ठेगाना, मेनु समीक्षा: "बियर शिष्टाचार", सेन्ट पीटर्सबर्ग पल्ट
भ्लाडिभास्तोक, "जुमा" (रेस्टुरेन्ट)। रेस्टुरा समीक्षा
मारिनो मा क्याफे: समीक्षा ठेगाना
रेस्टुरेन्ट साइकेटिभकर: ठेगाना, विशेष गरी
आधुनिक पूर्व - "किशमिश" (रेस्टुरेन्ट, ऊफा)
फूल र चकलेट को Bouquets
व्यवस्था अन्तर्गत Kindergartens को सञ्चालनको मोड
Karachai नस्ल घोडाहरू: विवरण र फोटो
संसारको मुख्य climatic क्षेत्र: शीर्षक, टेबल र नक्सा। को जलवायु क्षेत्र रूस मा के अवस्थित छन्?
केक "कमिला हिल": फोटो संग नुस्खा
मानिसहरू मा कमर र तिध्रा बिचको भाग गांठ: यो के हो र खतरनाक के छ?
तिनीहरूलाई लागि रणनीति पन्जा र हेरविचार
चरण विवरण र सिफारिसहरू द्वारा एक चरण: आफ्नो हातमा काठ बनेको एक फ्रेम कसरी बनाउने
काटयो रजत बालुवा होटल3(बारेमा थाईल्याण्ड / फुकेत।): फोटो र समीक्षा
Althaus - को connoisseurs का लागि टी
डबल गम: आवेदन र बुनाई प्रविधि
ग्राहक समीक्षा र सुविधाहरू: वजन "Elavil गहन" को लागि औषधि